Tafiatra 35 ireo namoy ny ainy tao anatin’ny herinandro teo anelanelan’ny 06 aogositra-13 aogositra, izany hoe 7 isan’andro eo ny salan’isa. Raha 80 ny tranga vaovao rehetra notaterina afak’omaly hita tamin’ny fitiliana 400, dia niakatra 125 indray izany omaly, ka 13522 ny tranga hatramin’izay. Fitiliana 850 no nahitana izany, ka 14,70% ny taham-pahavoazana. Eo amin’ny 22% kosa ny taham-pahavoazana ankapobeny. 50 tamin’ireo tranga vaovao no tao anatin’ny Faritanin’Antananarivo (49 Analamanga, 01 Itasy); 24 Toamasina tany Alaotra Mangoro; 16 Fianarantsoa (07 Matsiatra Ambony, 09 tany Manakara Faritra Vatovavy Fitovinany); 20 Mahajanga (18 Faritra Boeny ka 11 Mahajanga ary 07 Marovoay, 02 tany Antsohihy Faritra SOFIA); 13 Antsiranana; 07 Faritra SAVA ka ny 04 tany Sambava, ary 03 Antalaha: 06 Faritra DIANA ka ny 05 tany Antsiranana ary 01 Ambaja); 02 tao Toliara ao anatin’ny Faritra Atsimo Andrefana.
TAFIAKATRA 87% NY TAHAM-PAHASITRANANA
Niampy 251 ireo sitrana, ka 11 780 no sitrana izany hatreto, izay manome taham-pahavoazana ankapobeny ka 87,11% ny taham-pahasitranana hatreto. 1580 na ny 11,68% kosa no mbola manaraka fitsaboan. Nihena 18 ny "formes graves" ka 85 ny fitambarany hatreto. Ny 54 ao anatin’ny Faritra Analamanga, 16 Matsiatra Ambony (Fianarantsoa) ; 04 Atsimo Andrefana (Toliara), 04 Faritra Boeny.